अधुवा मात्र नभएर अधुवाको तेल पनि हुन्छ निकै लाभदायक, जान्नुहोस् यसका ५ अद्भुत फाइदाहरु ! - PUBLICAAWAJ
अधुवा मात्र नभएर अधुवाको तेल पनि हुन्छ निकै लाभदायक, जान्नुहोस् यसका ५ अद्भुत फाइदाहरु !
प्रकाशित : बिहिबार, फागुन २३, २०७५१२:१६ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
एजेन्सी, हामी सबैलाई थाहै छ कि अधुवा स्वास्थ्यको लागी निकै लाभदायक हुन्छ । अधुवामा आवश्यक पौष्टिक तत्व रहेको हुन्छ । अधुवामा रहेको एन्टी-ब्याक्टेरियल र एन्टी-अक्सिडेन्ट गुणले रुगा-खोकीलाई निकै आराम दिन्छ । स्वास्थ्यको साथ साथै अधुवा छाला र कपालको लागी पनि निकै लाभदायक हुन्छ । अधुवाको प्रयोगले छाला र कपाललाई ड्यामेज हुनबाट बचाउँछ । तर के तपाइँलाई यो थाहा छ कि अधुवाको साथ साथै अधुवाको तेल पनि निकै लाभदायक हुन्छ । यसले स्वास्थ्य सम्बन्धि निकै समस्याहरुमा फाइदा पुर्याउँछ । स्वस्थ रहन र इम्युनिटी पावरलाई बलियो बनाउनको लागी पनि अधुवाको तेलको सेवन गर्न सकिन्छ ।
यि हुन् अधुवाको तेलका फाइदाहरु :
दुखाई कम गर्न मद्दत गर्दछ
अधुवाको तेलको निकै ठुलो फाइदा माम्स्पेशी र जोर्नीको दुखाईलाई ठिक गर्नु हो । अधुवाको तेलले शरीरको सुन्नाइलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ । यस तेलको प्रयोगले शरीरको माम्स्पेशी र जोर्नीको दुखाईबाट आराम पाउन सकिन्छ । यदि तपाइँ पनि जोर्नी र माम्स्पेशीको दुखाईबाट हैरान हुनुहुन्छ भने अधुवाको तेलको प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ ।
स्वास-प्रस्वासको समस्यामा लाभदायक
स्वास-प्रस्वास सम्बन्धि बिमारीमा पनि अधुवा निकै लाभदायक हुन्छ । अधुवाले घाँटी र नाकलाई सफा गर्दछ र साथै रुगा-खोकीबाट आराम पनि दिन्छ । यस्तै स्वास-प्रस्वास सम्बन्धि बिमारीबाट आराम पाउनको लागि तपाइँले अधुवाको तेलको प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ ।
पाचन प्रणालीमा मद्दत
अधुवाको तेलको सेवनले पाचन प्रणाली राम्रो हुन्छ । अझ भन्ने हो भने खानाको स्वाद बढाउनको निम्ति अधुवाको तेलको प्रयोग गरिन्छ र साथै यसले पाचन प्रणालीमा पनि मद्दत गरिरहेको हुन्छ ।
ब्लड शुगर लेभेलमा नियन्त्रण
अधुवाले ब्लड शुगर लेभेललाई कम गर्न मद्दत गर्दछ । यसमा एन्टी डायबेटिक गुणहरु हुन्छन् जसले मुटु सम्बन्धि बिमारीहरुलाई टाढा राख्दछ । यदि तपाइँ पनि मुटुको बिमारी हुनुहुन्छ भने यसको प्रयोग गर्नु निकै लाभदायक हुन्छ ।
कोलेस्ट्रोल कम गर्दछ
कोलेस्ट्रोलले मुटुलाई हानी पुर्याउँदछ र अधुवाले कोलेस्ट्रोल लेभेललाई कम गर्न मद्दत गर्दछ । यसरी यो मुटु सम्बन्धि बिमारीको लागि पनि निकै लाभदायक हुन्छ ।
भारतमा एकैदिन झण्डै ७६ हजार सङ्क्रमित भेटिए
२४ घण्टामा एक हजार तीन सय ५१ जना संक्रिमत थपिए, कोरोना जित्नेको सङ्ख्या ५४ हजार ६४० पुग्याे
होलिको रंगले कपाललाई हुँदैन नोक्सान, फलो गर्नुहोस् यि टिप्स !